November 24, 2021 | Facebook Khabar
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रथम प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालय स्तरीय [ … ]
काठमाडौं । ऋणको ब्याज अनावश्यक रुपमा बढाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गएर प्रिमियम दर बढाउने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको हो [ … ]
तीन कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च दरमा बृदि,प्रतिकित्ता कुनको कति पुग्यो ?
facebook - November 24, 2021 November 24, 2021
काठमाडौं । बुधवार मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल आएको छ । उक्त दिन कम्पनीको सेयर मूल्य ९.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साताको चौथो कारोबार दिन कम्पनीको सेयर [ … ]
झिनो अंकले बढ्यो शेयर बजार,कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेन
काठमाण्डौ । साताको चौथो दिन शेयर बजार मापक सूचक नेप्से करिव २ अंकले बढेर बजार बन्द भएको छ । योसँगै समग्र बजार २७३४ विन्दुमा पुगेको छ । दिनैभरि उतारचढाव रहेको [ … ]
नेप्सेमा दुई कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत, कुनको ओपन रेञ्ज कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा दुई हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएको छ । बुधवार सामलिङ्ग पावर र न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएको हो । यी दुवै कम्पनीको बिहीबारदेखि कारोबारमा [ … ]
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै समयमा तरलता समस्या देखिने गरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले [ … ]